Iindaba eNigeria nangaphaya: Iimoto ze-E-Money zaBasebenzi, iiLampard + nangakumbi
I-Rave News Digest: Iimoto ze-E-Money Staff Cars, abahlohli baseNigeria bayaphikisana nomthetho wokuhlukunyezwa ngokwesondo, uFrank Lampard + nangakumbi
E-Izipho zabasebenzi zeMoney zokumakisha usuku lokuzalwa kwakhe, abahlohli baseNigeria bayaphikisana nomthetho wokuxhatshazwa ngokwesondo, uFrank Lampard uthetha ngokuchasene nesigqibo seVAR. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. Usomashishini wase-Niya wase-E-Money uthengisa izithuthi kubasebenzi bakhe ukumakisha umhla wokuzalwa kwakhe
I-E-Money, abasebenzi bakhe kunye neemoto zabo ezintsha
Usomashishini wase-Nigeriya waseNigeria, Imali, yenye yeempawu ezithandwayo zentlalo yoluntu ezaziwayo ngesisa sakhe. Ibhiliyoni ye-E-Money iye yenza iindaba izihlandlo ezininzi zokukhupha izipho ezibizayo ebantwini kubandakanya amalungu abasebenzi bakhe.
Ngomhla we-18 kaFebruwari ngo-2020, umphathi we-Music Star ezintlanu watyhalela unyaka ubudala ukuba onwabe abalandeli kumaziko eendaba ezentlalo. Ukubhiyozela umsitho, i-E-Money, nangona kunjalo, igqibe ekubeni yenze into eyahlukileyo kule iqhelekileyo ngokunika abasebenzi iimoto njengezipho. Imifanekiso ekwabelwana ngayo nge-E-Money yabasebenzi bakhe bezemidlalo yoncumo olukhulu njengoko bonke benikwa izipho zabo.
Kwi-caption ehamba neefoto, i-E-Money yathi ayikho enye indlela ebalaseleyo yokumakisha imini yakhe enkulu kunokuxabisa abo bagcina ishishini lakhe lihamba.
2. Abahlohli baseNigeria bayaphikisana nomthetho wokuxhatshazwa ngokwesondo
I-BBC ithumele iintatheli ezingafunekiyo zibiza abafundi ngaphakathi kwiiyunivesithi
Umzimba omele abahlohli baseyunivesithi eNigeria uphikisana nomthetho ojolise ekuthinteleni ukuxhatshazwa ngokwesini kwiidyunivesithi. Umbutho wabasebenzi wemfundo uthi umthetho ujolise ngokungafanelekanga kwaye ubabeka esichengeni abahlohli baseyunivesithi.
Lo mthetho usayilwayo uphakamisa iminyaka emihlanu yokuvalelwa kwabahlohli abagwetywa ngokuxhatshazwa ngokwesondo kwabafundi babo. Umthetho oyilwayo waziswa ngokulandelayo I-BBC Africa Uphando lwamehlo eveze ukungaziphathi kakuhle ngokwesini ngabahlohli abaninzi kwiiyunivesithi ezimbini eziphezulu zaseNtshona.
Isityhilelo sakhokelela ekumisweni kwabanye abafundisi kwiYunivesithi yaseLagos nakwiYunivesithi yaseGhana.
3. I-US ithembisa i- $ 8M yokulwa nesibetho seenkumbi
IKenya lelinye lamazwe athethwe lihlaselo lweenkumbi
I-US ithembise ukubonelela ngeedola ezisibhozo (i-8m) yeedola ukulawula iinkumbi zasentlango e-Ethiopia, Kenya naseSomalia. Unobhala welizwe laseMelika uMike Pompeo ubhengeze le nkxaso kwinkomfa yabezindaba kunye nomphathiswa wezangaphandle wase-Ethiopia Gedu Andargachew eAddis Ababa.
Kwiveki ephelileyo Umbutho Wezokutya Nezolimo we-UN (i-FAO) ubuze uluntu lwamazwe aphesheya ukuba lubonelele phantse ngeedola ezingama-76 (iirandi ezingama-58m) ukuxhasa ukutshiza kweendawo ezichaphazelekayo ngesibulala-zinambuzane.
I-arhente ye-UN yalumkisa ukuba ingingqi ye-Mpuma ye-Afrika inokuba kwinqanaba lomngcipheko wokutya ukuba ngaba iinkumbi ezinkulu ezidla izityalo kunye namadlelo azilawulwa. Kukho uloyiko lokuba iinkumbi - sele zikumakhulu ezigidi - ziya kuphinda zande. Iinzame zokulawula ukwenzakaliswa ukuza kuthi ga ngoku azange isebenze.
4. Unyulo luka-Afghanistan: U-Ashraf Ghani wabhengeza ophumeleleyo
IKomishini yoNyulo eZimeleyo ivakalise ngoLwesibini ukuba u-Ghani ufumane iipesenti ezingama-50.64 yevoti ye-28 kaSeptemba ngo-2019
UMongameli ofanelekileyo Ashraf Ghani Kubhengezwe njengophumeleleyo kunyulo lwe-Afghanistan, malunga neenyanga ezintlanu emva kokuba kuvotwe kwenziwe into ephantsi ngenxa yesoyikiso sobundlobongela kunye nokukhathazeka ngobuqhetseba kunyulo.
IKomishini yoNyulo eziMeleyo (i-IEC) ibhengeze ngoLwesibini ukuba u-Ghani ulungiselele iipesenti ezingama-50.64 yeevoti nge-28 kaSeptemba kunyaka ophelileyo, wabetha kwi-Chief Executive Abdullah Abdullah, ofumene iipesenti ezingama-39.52 yeevoti.
Emva kwangoLwesibini, u-Abdullah wangenela iziphumo zokugqibela kwaye wathembisa ukwenza urhulumente wakhe odibeneyo.
"Iqela lethu, elisekwe kwiivoti ezicocekileyo kunye ne-biometric, liphumelele kwaye sibhengeza ukuphumelela kwethu. Abakhohlisi ziintloni zembali kwaye sibhengeza urhulumente wethu obandakanya wonke umntu,”U-Abdullah uthe kwinkomfa yeendaba kwikomkhulu, iKabul.
5. UFrank Lampard: izigqibo ze-VAR 'zotshabalalisa umphefumlo' zabalandeli beChelsea
Isikrini sokuthatha isigqibo seVAR size neendaba ezimbi- eziphindaphindiweyo-zeChelsea
"Umncedisi kasompempe wevidiyo akazange ayifumane ncam into yokulahleka kwe-2-0 kwekhaya laseManchester eManchester United kwaye oko kwabulala umphefumlo kwabaxhasi", utshilo umphathi weBlues UFrank Lampard.
Igosa laseVAR UChris Kavanagh khange uve UHarry Maguire Ifanelwe ikhadi elibomvu ngokubonakala kokukhaba Michy Batshuayi. U-Kavanagh uphinde wagweba iinjongo ezimbini ze-Chelsea - enye ityhilwe ebhokisini kwaye enye yelahleko. Amakhulu abalandeli basekhaya ashiye i-Stamford Bridge engaphezulu kwemizuzu eli-10.
Imixholo evela Anthony Martial kwaye uMagireire wafumana i-ligi yokuqala ephindwe kabini kwiChelsea yaseManchester United ukusukela kunyaka we-1987-88.
I-Chelsea yaba liqela lesibini kuphela ukuba ibe neenjongo ezimbini ezinikezelwe ebaleni kodwa ke yagqitywa yi-VAR kumdlalo ofanayo wePremier League, emva kweSheffield United ngokuchasene neBrighton ngoDisemba.
IVeki yeendaba yethu yoSuku lweeVeki ikulethela isishwankathelo sezihloko ezintlanu ezishushu namhlanje eziquka iindaba zakutshanje eNigeria, iindaba zaseAfrika, iindaba zezopolitiko, iindaba zamazwe aphesheya, iindaba zeHollywood, iindaba zemidlalo kunye neendaba zabantu abadumileyo baseNigeria nabadumileyo baseAfrika. Kwakhona, lindela amanye amabali aphezulu kunye nezinye iindaba ezihambahambayo zakutshanje namhlanje eSahara. Isishwankathelo seendaba zamva nje zaseNigeria
Uhlobo Rave Februwari 18, 2020
Ezona zinto ziRave zifanelekileyo kwiLondon kwiVeki yeLondon yeLondon ngo-2020